Dheefta Cuntada Caafimaadka leh+ OTC | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Maarso08, 2022 Context link
Taariikhda Ugu Dambaysay ee La Cusbooneysiiyay: Context link Maarso08, 2022 Context link
Waxay u muuqataa sida qiimaha wax walba oo kaliya ayaa kor u kacaya maalmahan. Laakiin waa dadka dakhligooda xaddidan yahay kuwaas oo dhab ahaantii dareemo cadaadiska. Xitaa iibsashada waxyaabaha daruuriga ah sida badeecooyinka daryeelka caafimaadka iyo cuntada aan farmashiyaha laga iibsado (OTC) waxay noqon karaan caqabad. Kuwa haysta Medicaid iyo Medicare labadaba, qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa ku siin kara gargaar soo dhawayn leh.
Qorshayaasha caafimaadka ee laba u qalmitaanka waxaa loogu talagalay dadka u-qalma Medicaid iyo Medicare labadaba. Context link Qorshayaasha caafimaadka ee labada ah waxaa ka mid ah faa'iidooyin badan oo dheeraad ah kuwaas oo nolosha u fududayn kara shakhsiyaadka dakhligoodu hooseeyo. Context link Dhibcaha lagu iibsado alaabta OTC iyo raashinka caymisan waa hal tusaale. Context link Arag dhammaan dheefaha kale ee qorshayaasha caafimaad ee laba geesoodka ah ay bixin karaan.
Dheefaha Cuntada Caafimaadka leh(OTC+Healthy Food) waxay ka caawisaa xubnaha UnitedHealthcare inay fidiyaan doollarkooda
Baahiyaha 2 kulanka leh 1 dheef
OTC+Healthy Food waa faa'iido qiimo leh oo lagu daro qorshayaasha caafimaadka laba-geesoodka ah oo ka socda UnitedHealthcare.* Dheeftaani waxay siinaysaa xubnaheena dhibco si ay uga iibsadaan badeecooyinka iyo raashiinka caymiska leh ee OTC ee laga ibsado tafaariiqleyaal badan. Dhibcaha waxa lagu shubaa kaarka prepaid, kaas oo xubnaha ay u adeegsan karaan si ay wax uga bixiyaan barta lacag-bixinta. Waxay ku bixin karaan dhammaan dhibcahooda cunto caafimaad leh, dhammaan badeecada OTC ama qaar ka mid ah mid kasta. Dhinac kasta ha noqotee, xubnaha waxay alaabta ku helayaan si lacag la'aan ah.
Xanuun baabi'iyeyaasha, dhibcaha qufaca iyo daawooyinka kale ee OTC
Buraashka cadayga, daawada cadayga iyo baahiyaha kale ee ilkaha
Hilibka, digaaga iyo kalluunka
Ukumaha, burcadka, caanaha iyo baddeecooyinka kale ee caanaha ka samaysan
Soo iibso boqollaal shay oo laga yaabo inaad u baahan tahay
Haddii aad haysatay qorshaha caafimaadka ee laba-geesoodka ah, waxaad isticmaali kartaa dhibcahaaga OTC+Healthy Food si aad u soo iibsato badeecooyin kala duwan oo OTC ah oo aad u baahan karto. Badeecooyinka la ansixiyay waxaa ka mid noqon kara:
Fiitamiinada iyo kaabisyada
Buraashka cadayga, daawada cadayga, kareemka ilkaha iyo kaniiniyada
Tirtirayaasha nadiifinta iyo xafaayada xakameynta kaadiheysta
Faashadaha iyo agabyada gargaarka degdegga ah
Daawooyinka caloosha iyo kuwa badan oo kale
Ka buuxi dambiishaada cunto caafimaad leh.
Adoo adeegsanaayo dhibcahaaga OTC+Healthy Food, waxaad ku iibsan kartaa cuntooyin kala duwan oo la ansixiyay, sida:
Digirta, rootiga, badarka iyo baastada
Cabbitaannada nafaqooyinka dheeraadka ah leh sida Boost® iyo Esure®
Halkee ayaad ku qarash gareyn kartaa dhibcaha OTC+Healthy Food?
Dhibcaha OTC+Healthy Food ayaa sidoo kale laga aqbalaa dukaamo badan, laga bilaabo dukaamada goladaha yar yar iyo dukaamada xaafadaha ilaa tafaariiqlayda waaweyn ee qaranka sida Walgreens iyo Walmart. Waxa sidoo kale laga yaabaa in raashiinkaaga lagaaga keeno dukaamadaada Walmart.com ama waxaad isticmaali kartaa xulashooyinka kale oo guriga lagu geynayo ee ka socoto Cuntada Hooyo (Mom’s Meals).*
Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah, waxaad sidoo kale ka dalban kartaa baddeecooyinka OTC adoo u maraya daliilhayaha. Markaad onlayn ku dalbato ama talefoon ahaan, alaabaha ayaa laguu soo diri doonaa oo isla markaaba laguugu keeni doonaa albaabkaaga.
*XUSUUSIN: Macaashyada qorshe kasta iyo goobta adeeg kasta way kala duwan yihiin. Xaddidaado iyo ka-dhaafitaano ayaa khuseeya. Faahfaahinada saxda ah ee faa'iidada OTC+ Healthy Food ee ay ku jirto 2022 Qorshahaaga Baahiyaha Gaarka ah ee laba-geesoodka, wac lambarka ama booqo mareegta ku qoran dhabarka dambe ee kaarkaaga OTC+Healthy Food.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 04.18.2022 waqtiga 02:59 GALABNIMO CDT